Maalinta Koobaad ee Shirka wadatashiga doorashooyinka oo la soo geba-gabeeyay - Awdinle Online
Waxaa Xarunta Teendhada Afisiyooni ee Magalada Muqdisho lagu soo geba-gabeeyay maalinkti koowaad ee Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Arrimaha Doorashooyinka oo saaka furmay.
Shirka oo uu gudoominayay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa goobjoog ka ah, Madaxweynayaasha Sahnta dowlad Goboleed & Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, waxana looga hadlay sidii loo wajihii xalka gaarista Arrrimaha doorashooyinka.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in Madaxda shirka ka qeyb gashalay ay gaareen isfaham, isla markaana Maalinta Berito oo Axad ay ay madaxda dib isugu soo laban doonaan si ay shirka u sii amba qaadaan.
Qaar kamid ah xubnaha Midowga Musharixiinta, inta badan saamileyda Siyaasadeed ee dalka iyo Shacabka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay shirka, iyaga oo rajo wanaagsan ka muujiyay inay kasoo baxaan heshiis laga gaaro doorahada.
Previous articleDowladda Somaliya oo markii ugu horeysay ka hadahay dagaalkii ka dhacay Jowhar
Next articleAfar arrimood oo caqabad ku noqon kara wadahadallada doorashada (Warbixin)